देउरालीको कथा भन्छु है त - A complete Nepali news portal based on news & views
देउरालीको कथा भन्छु है त
३० श्रावण २०७६, बिहीबार १६:२१ August 19, 2019 Nonstop Khabar
चुरोटे र बानियाँहरू भरिया लाएर गाउँतिर नै आउँथे । देशमा बहुदलसँगै गाउँँमा आएको सडकले नयाँबजारको रूपमा विकास गर्ने प्रयत्न गर्दै थियो यो देउराली डाँडामा । योभन्दा पहिले झिल्टुङको डबली थियो सानो बजार यो गाउँको । काम मन्दिर कोटघर केही छाप्रोहरू केही नेवारको पसलले धान्न थालेको थियो यो गाउँको बजार । उहिले मल्ल राजाको पालामा के थियो डबली कसैलाई थाहा छैन तर पञ्चायतको बेला गाउँँ पञ्चायत भवन थियो यही डबलीमा । आज त गाउँ–गाउँमा मकै कोदो फल्ने बारी मासेर सडक र घरघडेरी बनेको थियो घर घरमा खुलेका पसलहरूले गाउँमा बजारको प्रतिनिधित्व गरेको छ । गाउँमा हुर्केको मदिरा संस्कृतिको एक नयाँ थलो बनेको छ देउराली र देउरालीको भट्टी पसल रक्सी भटी र देश उस्तै थियो पर्यायवाची चित्र थियो गीतमा झैँ :
गीत त मिठो थियो तर आज गाउँँको मकै भटमास, कोदो, लोकल, कुखुरा, कोदोको रक्सी होइन, मना र चिनी हालेको रक्सीले धानेको थियो गाउँको बजारको खपत त्यो पनि पानी मिसाएर । केही दशक पहिला मान्छे लरबराएर लिडेको देख्दा भन्थे, यो गाउँतिर जाँड खाएको अर्चलेका भोटेजस्तो अहिले भन्छन् देउरालीका जड्याहा बाहुनजस्तो । सहिद कृष्ण सेनको ‘कान्छी भट्टी र देश’ कवितामा जस्तो समाजको प्रतिबिम्ब छ आज गाउँ सहरको भट्टीहरूमा :
अनेक दुःखका बीच गाउँ–गाउँमा भट्टीहरू चलिरहेछ । आज बोइलर कुखुरा, चाउचाउ, बियर, रुस्लान भोड्का बजार छाएको छ । आज दाउरा होइन, ग्याँस सिलिन्डर छाएको छ गाउँमा । यो देउरालीमा बिहानपख चिया व्यापार त उल्कै छ । रु. २ बाट रु. १० पुगेको छ । दैनिक १५ लिटर दूधमा पानी हालेर चिया बेचिन्छ । यो व्यापारको इतिहास जम्मा दश वर्षको मात्र हो । यही चियाको गिलासबाट सुरु हुने देशको राजनीतिक बहस सुन्दा लाग्छ, यी मनुवा सिंहदरबार छिर्ने अवसर नपाएर यता बर्बराउँदैछन् । सिंहदरबार छिर्नेहरूभन्दा कम छैन यिनका चेतनाहरू !
देउरालीमा अर्को कथा छ, देउरालीको स्कूलको । यहाँ स्कूल खोले हली पाइन्न भन्दै स्कूलविरोधी थिए त्यो बेला । तर, अहिले स्कूल छ तर गाउँमा हलीचाहिँ छैन, खेतबारी सबै बाँझो नै छ । सबै युवाहरू विदेशतिर वा सहरतिर छन् । गोरो छाला भएको खैरेलाई तामझामसहित गाउँँ–गाउँँमा डुलाइन्छ तर हिजो काठ र स्याउला बोकेर कोदो पाथी उठाएर स्कुल चलाउनेहरूलाई उपेक्षा र खिसिट्युउरी गर्नेहरू गैर–सरकारी संस्थाको लागि बाजागाजासहित तामझाम गरेर उत्सव गर्दै चाकडी गर्दै थिए गाउँतिर ।